တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: How to add Myanmar Calendar inablog?
Posted by Philip Shield at 6:03 PM
I added on my page and.. It's really unique.
ကို ဖြိုးဝေအောင် ခင်ဗျား ၊ ကျွန်တော် မနေ့ က မြန်မာ ပြက္ခဒိန်ကို တင် လိုက် ပါ တယ်။ ဒါ ပေမယ့် ညနေပိုင်း လောက် မှ ရက် စွဲ က ပြောင်း ပါတယ်။ ကို ဝဏ္ဏ ရဲ့ site နဲ့ အချိန် မတူလို့ ပါ သလား ။ ဘယ် လို ပြင်ရင် ရ ပါ သလဲ။ ကျွန်တော့် ဘလော့ခ်မှာ ကျေးဇူးတင် ကြောင်း ရေး ထား ပါ တယ်။ wesheme ရဲ့ သူငယ်ချင်း ပါ။
မြန်မာ ပြက္ခဒိန်အကြောင်း ကိုရဲမြတ်သူထံမှ သိရလို့ ကျတော့်ဘလော့မှာလည်း ကိုဖြိုးဝေကျော်ရဲ့ ဘလော့ကို ညွှန်းပြီးရေးထားကြောင်း အသိပေးပါရစေ ခင်ဗျာ...
ကိုမောင်လှဘလော့ကနေဖတ်မိပြီး .. ကျနော့်ဘလော့မှာလည်း ပြက္ခဒိန်လေးထည့်ထားလိုက်ပါတယ် ..။
အဝေးမှာ ရောက်နေတဲ့ ကျနော်တို့အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန်က တကယ်ပဲပျောက်ကွယ်လုလု ဖြစ်နေတော့ ..
တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ ကူညီမှုပါပဲ..။
thanks you Ko Mg Hla.i take this one also.But i want to get my English date.it's one day late .I don't know how to edit.pls command me.
i'm appriaciate u to share ur knowledge.
Nice one and thank you for this post. I do like Ko WanNa idea about most Burmese people already forget about Burmese Canlender including me. ^_^
Comment ၀င်ရေးပေးသွားကြတဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။